ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရင်တာ၊ UV ပရင်တာနှင့် Dtg ပရင်တာထုတ်လုပ်သူ | အာရုံစူးစိုက်
Nebulas-62F အတွက် Focus Inc. Toturials ဗီဒီယိုများ
A3 DTG ပရင်တာများအတွက် Focus Inc. Toturials ဗီဒီယိုများ 3350
A3 UV ပရင်တာများအတွက် Focus Inc. Toturials ဗီဒီယိုများ 3350 အတွက်ဗီဒီယိုများ
A2 DTG ပရင်တာများအတွက် Focus Inc. Toturials ဗီဒီယိုများ 6040
A1 UV ပရင်တာများအတွက် Focus Inc. Toturials ဗီဒီယိုများ 6090
A2 UV ပရင်တာများအတွက် Focus Inc. Toturials ဗီဒီယိုများ 6040
Atlas-1311 အတွက် Focus Inc. Toturials ဗီဒီယိုများ
Nebulas-35F အတွက် Focus Inc. Toturials ဗီဒီယိုများ
ခရမ်းလွန် Printers မှပုံနှိပ်ခြင်းနမူနာ
2 In1 နှင့်4တွင် 1 တီရှပ် Pallet မှ Focus A2 DTG ပရင်တာပေးသွင်း& ထုတ်လုပ်သူများ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း Inc.
လှည့်စားခြင်းနှင့်အလှဆင်ခြင်းများကိုပိုမိုမြန်ဆန်သောထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ပုံနှိပ်မြန်နှုန်းကိုပင်ပိုမိုထိရောက်စွာ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်စွမ်းရည်များပိုမိုထိရောက်စေရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက် ပို. ခက်ခဲပြီးပိုမိုထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်သည်, ထို့ကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားလာခြင်းနှင့်စျေးကွက်အသစ်များသို့နှိပ်ခြင်းအပေါ်သင်ပိုမိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
China Focus UVF Hot Stamping Soldint Soliding Moverers - Focus Inc.
သင်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ခြင်းကိုသင်ရိုက်ကူးရန်အချိန်များရှိရမည့်အချိန်များရှိသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုတစ်ခါတစ်ရံပုံနှိပ်ထားသောပစ္စည်းသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အရာသည်ထူးခြားသောအယူခံဝင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ပုံနှိပ်ထားသောဂုဏ်သတ္တိများကိုသတ္တုပြားများအပြီးသတ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည်ကောင်းကျိုးများသာမကဘဲအတန်းနှင့်အရည်အသွေးကိုလည်းသိရှိစေသည်။သင်၏ပုံနှိပ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက် Metallic finish ကိုသုံးနိုင်သည့်နည်းလမ်းနှစ်နည်း - Metallic Foul Stamping နှင့် Metallic မှင်ပုံနှိပ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤနည်းစနစ်နှစ်ခုလုံးသည်ဗေဒကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏ပုံနှိပ်များကိုတောက်ပစေပြီးတောက်ပတောက်ပနေပြီး,Metallic Foul Damping သည်အမည်အရသင်၏စတော့ရှယ်ယာပေါ်ရှိသတ္တုပါးပေါ်ရှိသတ္တုပါးပေါ်ရှိသတ္တုပါးပေါ်ရှိသတ္တုပါးကိုစွဲမှတ်စေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၎င်းသည်သင်၏ရွေးချယ်မှု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိသတ္တုပါးကိုဆွဲယူခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုထူးခြားသည့်အသွင်အပြင်တစ်ခုပေးရုံသာမက texture ကိုလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Metallic မှင်ပုံနှိပ်ခြင်းသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထူးမှင်အမျိုးအစားကိုအမှန်တကယ်သတ္တုအမှုန်များနှင့်ရောစပ်ထားသည့်သတ္တုအမှုန်များနှင့်ရောစပ်ထားပြီး၎င်းကိုသတ္တုတောက်ပသောအသွင်အပြင်ကိုပေးသည်။ မင်ကိုပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အသုံးပြုသော်လည်းလိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်နောက်ဆက်တွဲအင်္ကျီများလည်းလိုအပ်နိုင်သည်။
ဖြစ်စဉ်ကိုပုံနှိပ်နှစ်ခု Epson F1080 ပုံနှိပ်အကြီးအကဲများနှင့်အတူထုတ်ကုန်အသစ် A3 DTF ပရင်တာကိုအာရုံစူးစိုက်!
Ltd. , focus Inc ကဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်R ကိုတစ်ထုတ်လုပ်သူသူသည်ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်, မှာ set up ခဲ့သည်&: D အကောင်းဆုံးနဲ့အလားအလာ DTG ပရင်တာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ခရမ်းလွန်, ဆိုင်းဘုတ်များပရင်တာ flatbed&ထုတ်ကုန် adverting ။ အတွေ့အကြုံ 17 နှစ်နှင့်အတူကျွန်တော်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာအားလုံးထုတ်ကုန်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် Real-time ထောက်ခံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာများ, တင်းကျပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဝယ်ယူရုပ်သံလိုင်းနှင့် altitudinal တာဝန်ရှိအရေးယူအမှီနိုင်စွမ်းရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်နိုင်ငံတကာပုံနှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေလုပ်ပါ!ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်! :)
ဂေါက်သီးဘောလုံးအတွက် Focus UV ပုံနှိပ်ခြင်း! ကုန်သွင်းသူ& ထုတ်လုပ်သူများ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း Inc.
သစ်သား, သတ္တုကြွေပြားများ, acrylic, ဖန်, ဖန်, သားရေ, ကျောက်, Expstrate to Direct to Direct to Direct Printing Captilics သို့တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတွင်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများကိုပုံနှိပ်ရန်လိုအပ်သည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရမ်းလွန် Printers တစ်ခုချင်းစီသည်ထူးချွန်သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများပါ0င်သောကြောင့်သင်၏အသင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည့်လေ့ကျင့်မှုနှင့်အထောက်အပံ့များရှိလိမ့်မည်ဟုအသိပေးနိုင်သည်။
ဖောက်သည်၏အချိန်နှင့် စွမ်းအင်ကို သက်သာစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Call Center မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မေးခွန်းလိုအပ်ခြင်း၊ ပြဿနာကိုင်တွယ်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ အပိုပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းတို့ပါရှိသော "ONE STOP" ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံခန့်ခွဲမှု အတွေးအခေါ်- အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှု၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် လူသားဆန်မှုတို့ ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပန်းတိုင်- စျေးကွက်၏တောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပါ။ ဖောက်သည်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက် ပေးစွမ်းသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်- သင့်ဆန္ဒကို ကျော်လွန်ကာ၊ တိုးမြှင့်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ရိုးသားမှု- ဆက်ဆံရေးအားလုံးတွင် ယုံကြည်မှုနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တာဝန်ယူမှု။
ဖောက်သည်၏အချိန်နှင့် စွမ်းအင်ကို သက်သာစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Call Center မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မေးခွန်းလိုအပ်ခြင်း၊ ပြဿနာကိုင်တွယ်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ အပိုပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းတို့ပါရှိသော "ONE STOP" ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဒဿနိကဗေဒ
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် လူသားဆန်မှု။
စျေးကွက်၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်း; ဖောက်သည်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက် ပေးစွမ်းသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သမျှသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
Increment Service ကုမ္ပဏီဖြစ်ရန် သင်၏ဆန္ဒကို ကျော်လွန်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် သမာဓိရှိမှု
ယုံကြည်မှုနှင့် ဆက်ဆံရေးအားလုံးတွင် ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ရှိသည်။
Focus Digital Technology Co., Ltd (အွန်လိုင်းမှ မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးခြင်း)။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးနှင့် အလားအလာရှိသော DTG မှ အထည်ချုပ်ပရင်တာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် LED-UV ပြားချပ်ချပ်ပရင်တာ၊ ကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်းစက်၊ CTS ကွန်ပျူတာမှ မျက်နှာပြင်ပုံရိပ်ဖော်စနစ်မှ ဆိုင်းဘုတ်များ၊&ဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်ကြော်ငြာ။ Ready-To-Print ဖြေရှင်းချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ နေရာချထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် ၁၇ နှစ်ကြာ အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံ၊ တင်းကျပ်သောအစိတ်အပိုင်းများဝယ်ယူမှုချန်နယ်နှင့် altitudinal တာဝန်သိလုပ်ဆောင်မှုတို့အပေါ် မူတည်၍ ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပံ့ပိုးပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးပေါ်အဓိကသတင်းများကို ပံ့ပိုးပေးကာ အမြတ်အစွန်းရှိသောထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးရန် စျေးကွက်ကိုအာရုံစိုက်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံရှိ ပံ့ပိုးကူညီရေးအဖွဲ့သည် နည်းပညာအားလုံးကို စုဆောင်းကာ အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုပေးရန် နောက်ဆုံးပေါ် လေ့ကျင့်မှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရယူပါ။
ကုန်သည်များအားလုံးသည် အဆိုပါပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်- အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော်လည်း စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းသော်လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှုမကောင်းခြင်း၊ ပံ့ပိုးမှုကောင်းသော်လည်း အရည်အသွေးမကောင်းခြင်း၊ အကျိုးဆက်မရှိသော အခကြေးငွေ၊ အပြည့်အဝလေ့ကျင့်မှုမရခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပံ့ပိုးကူညီမှုမရခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသောစစ်ဆေးမှုများကြောင့် တုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေးပါသည်။ နှင့်လျှောက်လွှာ။ Focus digital သည် သင့်အတွက် ဤပြဿနာမျိုးကို အမြင့်ဆုံးဖြေရှင်းရန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။--------- တင်းကျပ်သော "FOUR CHAIN" အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ "LONG-DISTANCE-LOG-ON -DIAGNOSIS" ပံ့ပိုးမှု၊ "ONE STOP" ဝန်ဆောင်မှု ကျွန်ုပ်တို့သည် တင်းကျပ်သော " Four Chain (Material Department control-Assemble line control-QC department control-Logistic department control") အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို မပို့ဆောင်မီ နဂိုအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်၊ သို့သော် ကုန်ပစ္စည်း 100 မဟုတ်ပါ။ % ပြီးပြည့်စုံသော၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိရောက်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်၊ သုံးစွဲသူများသည် ပြဿနာများနှင့် မေးခွန်းအားလုံးကို အမြန်ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ONLINE SUPPORT နှင့် LONG-DISTANCE-DIAGNOSE SUPPORT မှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိရောက်သောပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းချက်စာရွက်စာတမ်းများအဖြစ် စုစည်းထားသောကြောင့် သုံးစွဲသူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ftp မှ အမြန်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် ၁၇ နှစ်ကြာ အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အိန္ဒိယဖြန့်ချိသူသည် UV နှင့် DTG ပရင်တာကိုမည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။ ထုတ်လုပ်သူများ - အာရုံစူးစိုက်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအေးဂျင့်လိုချင်ခဲ့သည်Focus Inc. ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကမ္ဘာကြီးအတွက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားရှာဖွေနေသည်။မည်သူမဆိုစိတ်0င် စား. ကျွန်ုပ်တို့၏အေးဂျင့်ဖြစ်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချမှု,
ဖောက်သည်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း& ထုတ်လုပ်သူများ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း Inc.
Focus ဖောက်သည်များထံမှကောင်းသောအလုပ်များ, ၎င်းတို့သည်ကျွမ်းကျင်မှုများပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူလာ။ အလုပ်လုပ်ပါ, ပရင်တာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိပြီးစျေးကွက်အကြောင်းပိုမိုသိရှိပြီးစျေးနှင့်ကောင်းသောထုတ်ကုန်များကိုစျေးကွက်သို့ပို့ပေးပါ။
ဖောက်သည်၏အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုသိမ်းဆည်းရန် Call Center မှတ်ပုံတင်ခြင်း, မေးမြန်းမှုလိုအပ်သည်, ပြ problem နာကိုင်တွယ်ခြင်း,ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေးအခေါ် - အပြန်အလှန်အကျိုးကျေးဇူး,ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက် - စျေးကွက်၏တောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း, ဖောက်သည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုခံယူချက် - သင်၏ဆန္ဒကိုကျော်လွှားရန်,
Focus Inc မှ Athena ဂျက်လေယာဉ်နှင့် DTG ပရင်တာ၏ဖောက်သည်အသံ
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကဖောက်သည်များအားသူတို့၏ဘဝစံနမူနာများနှင့်အစီအစဉ်များကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေရန်ပျော်ရွှင်မှုရရန်0ယ်ယူရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့0မ်းသာပါသည်။ သင်ဗွီဒီယိုကြည့်လိုပါကဗီဒီယိုတွင်စီးပွားရေးမှုတ်သွင်းခြင်းကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
US နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။